Vato be efa tsy azo antoka intsony Atahorana ny ankamaroan’ireo faritra avo
Atahorana avokoa ny ankamaroan’ireo faritra avo eto an-drenivohitra ahitana vatobe raha ny fantatra.
Raha araka ny fanazavan’ny kolonely Elack Olivier, sekretera mpanatanteraka eo anivon’ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary dia efa saika miharatsy avokoa ireny vatobe mipetraka eny ambony ireny. Mikasika ilay famakiam-bato notanterahin’izy ireo teny Tsarafaritra Tsimbazaza, ohatra, dia nohazavainy fa vola be no lanin’ny fitondram-panjakana tamin’ny famakiana izany hiarovana ny ain’ny mponina. Mbola hoentin’izy ireo eo anivon’ny filankevitry ny minisitra moa ny mikasika ireny vatobe mbola atahorana ireny, tafiditra ao anatin’ny fiomanan’izy ireo amin’ny fiatrehana ny loza. Faritra valo no fantatra fa voakasik’izany. Tsiahivina fa tsy fa ankoatra ny rivodoza dia tafiditra ao anatin’ny asan’ny BNGRC ihany koa ny ady amin’ireo karazana loza maro samihafa mety hitranga.